Olee otú iji tọghata MKV ka 3GP
> Resource> Video> Olee otú iji tọghata MKV ka 3GP
Nwere otutu MKV faịlụ na kọmputa gị na chọrọ nyefee ha ka ha na ekwentị mkpanaaka gị na obi ụtọ na-aga? Ọ bụrụ otú ahụ, i nwere iji tọghata MKV ka a dakọtara usoro maka smartphones. 3GP nwere ike ịbụ usoro nke gị nhọrọ kasị mma. Ọ bụ a multimedia akpa format-eji na 3G color, nakwa dị ka ụfọdụ 2G na 4G igwe.
Iji tọghata MKV ka 3GP maka color, a mfe na-eji video Ntụgharị dị mkpa maka gị. Isiokwu a tumadi-egosi gị otú iji tọghata MKV faịlụ maka playback na ihe ọ bụla na-ewu ewu mobile ntị na ihe ndị magburu onwe MKV ka 3GP Ntụgharị. Nke ahụ bụ Video Ntụgharị maka Win (Video Ntụgharị maka Mac), nke nwere ike mfe inyere gị aka tọghata MKV format ka fọrọ nke nta ọ bụla usoro maka ihe ọ bụla na ngwaọrụ na elu video mma. Na zuru ezu nzọụkwụ ndị dị ka ndị:
Nzọụkwụ 1: Download, wụnye na-agba ọsọ a MKV ka 3GP Ntụgharị
The Mac na Windows mbipute a MKV video ka 3GP video Ntụgharị nwere ike ibudata kpọmkwem site na ịpị njikọ n'okpuru. Mgbe echichi, dị nnọọ ẹkedori ya.
Cheta na: Ọzọ, Aga m ewere Windows mbipute a ngwa n'ihi na ihe atụ na-egosi MKV ka 3GP akakabarede. N'ihi na Mac ọrụ, ị nwere ike pịa ebe a: Mac ọrụ 'Guide nke Video Ntụgharị maka Mac.
Nzọụkwụ 2: Import MKV faịlụ ka a MKV ka 3GP Ntụgharị
Mbubata MKV faịlụ ka a ngwa, na-aga "tọghata"> "Tinye Files" button na-agagharị na kọmputa gị na diski ike iji họrọ gị chọrọ MKV faịlụ na mara ha. Plus, akwa ngwa akwado ikpuru-dobe ime ihe na ogbe akakabarede, otú i nwere ike ịdọrọ otu ma ọ bụ ọtụtụ MKV faịlụ ka usoro ihe omume mfe.
Nzọụkwụ 3: Họrọ mmepụta format
A na ngwa na-enye gị fọrọ nke nta niile na-ewu ewu na ekwentị mkpanaaka ụdị na ya mmepụta format ndepụta, dị ka HTC usoro, Motorola, Nokia, Samsung, Blackberry, Sony wdg Ị nwere ike ịhọrọ ihe kwesịrị ekwesị mmepụta format dị ka gị onwe gị na ekwentị nlereanya. (N'ihi na Mac ọrụ, ị nwere ike họrọ 3GP usoro maka mkpanaaka gị ntị.
Nzọụkwụ 4: tọghata MKV maka color
Malite iji tọghata MKV faịlụ maka gị ntị site na ịpị "tọghata" button na ala-nri n'akụkụ nke a Video Ntụgharị maka Win 's interface. Olee otú ogologo akakabarede uche na-ewe gị kpamkpam na-adabere na size gị MKV faịlụ na arụmọrụ nke gị na kọmputa. Mgbe akakabarede a mere, ị nwere ike mbubata mmepụta faịlụ gị ntị na-egwu.
Olee otú dezie MP4, MKV, Flv, MOV na ndị ọzọ Formats na VirtualDub
Top 5 Free Online AVI ka 3GP Ntụgharị
Olee otú iji tọghata MKV ka TS na High-ọsọ na magburu onwe ya mma
Olee otú dezie iTunes Metadata (MP4, MOV, AVI, MKV, wdg)
Top 10 Christmas Onyinye echiche maka ikom na ndị inyom
iPhoto Alternative maka Mavericks
Olee otú Ọkụ Canon vidiyo na DVD
Video Movie Onye kere maka Windows 8: Easily Mee Video Movie
Olee otú Download HD Videos na One Click